မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း၊ ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာ ခွဲဝေ၊ ရရှိ၊ ထုတ်ပေး၊ လက်ကျန်စာရင်း (၁၄.၉.၂၀၁၉ရက်နေ့မှ ၂၀.၉.၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ)​​​​​​​
အပါတ်စဉ် မီတာခွဲဝေရရှိမှု၊ ထုတ်ပေးမှုနှင့် လက်ကျန်စာရင်း
( ၁၄.၉.၂၀၁၉ ) မှ (၂၀.၉.၂၀၁၉)ထိ
စဉ် အမျိုးအစား ယခင်အပါတ်
၁ 1Ø2W Static Watt Hour Meter 5(30)A Type-1 30558 - 1141 29417
၂ 1Ø2W Digital Meter 10(60)A Big Town Type -3 7867 - 2545 5322
၃ 3Ø4W Power Meter 10(30)A 216 - - 216
၄ 3Ø4W Power Meter 20(60)A - - - -
၅ 3Ø4W Power Meter 30(80)A - - - -
၆ 3Ø4W CT Meter 300/5A Digital 31 -328
၇ 3Ø4W CT Meter 1000/5A Digital - - - -
၈ 3Ø4W CT Meter 1200/5A Digital3- - 3
၉ 3Ø4W CT Meter 1500/5A Digital2- - 2
၁၀ 3Ø4W CT Meter 1500/5A Analogue 23 - - 23
Total - 3689
မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်းအပါတ်စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ်အလိုက် မီတာထုတ်ပေးစာရင်း
( ၁၄ . ၉ .၂၀၁၉ ) မှ ( ၂၀. ၉. ၂၀၁၉ )ထိ
စဉ် ခရိုင်/မြို့နယ် 1Ø2W
၁ မန္တလေးခရိုင် - - 1738 - - - - - - -
၂ ချမ်းမြသာစည် 41 - - - - - - - - -
၃ ပြည်ကြီးတံခွန် - - - - - - - - - -
၄ မဟာအောင်မြေ - - - - - -2- - -
၅ ပုသိမ်ကြီး - - - - - - 1 - - -
၆ အမရပူရ - - - - - - - - - -
၇ ပြင်ဦးလွင် - - - - - - - - - -
၈ မတ္တရာ 800 - 204 - - - - - - -
၉ သပိတ်ကျင်း - - - - - - - - - -
၁၀ စဉ့်ကူး - - - - - - - - - -
၁၁ တကောင်း - - - - - - - - - -
၁၂ ဝမ်းတွင်း - - - - - - - - -
၁၃ ကျောက်ဆည်မြို့ - - - - - - - - - -
၁၄ မြစ်သား - - - - - - - - - -
၁၅ တံတားဦး - - - - - - - - - -
၁၆ စဉ့်ကိုင် - - - - - - - - - -
၁၇ မိတ္ထီလာခရိုင် - - - - - - - - - -
၁၈ မြင်းခြံ 300 - 500 - - - - - - -
၁၉ ငါန်းဇွန် - - - - - - - - - -
၂၀ ညောင်ဦးခရိုင် - - - - - - - - - -
၂၁ ရမည်းသင်း - - - - - - - - - -
၂၂ ပျော်ဘွယ် - - 103 - - - - - - -
၂၃ ကျောက်ပန်းတောင်း - - - - - - - - - -
စုစုပေါင်း 1141 - 2545 - - -3- - -
Post under by : မန္တလေးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း(MESC)